Ngathi - Nanchang Qinglin Automobile Accessories Co., Ltd.
I-Nanchang Qinglin yeeMoto eziNcedisayo kwiComputer, Ltd. ngumenzi wezihlalo oqeqeshiweyo oneminyaka yamava. Iimveliso zethu eziphambili zizitulo zezolimo, izihlalo zokwakha, izihlalo zegadi kunye nezinye izinto ezizenzekelayo.
Ukuhlala kwe-KL kwasekwa ngo-2001 ngommandla weemitha zesikwere ezingama-26000. Sineziseko ezimbini zokuvelisa: iNanchang, Jiangxi kunye neYangzhou, Jiangsu. Ngabasebenzi abanezakhono ezaneleyo, izihlalo ze-KL zinamandla okuvelisa izihlalo ezingama-400,000pcs ngonyaka.
NgomGaqo-nkqubo weShishini kumthengi kuqala, umsebenzi weqela, eyona nkonzo intle, indawo yokuhlala ye-KL iya kwenza konke okusemandleni ukubonelela ngezihlalo ezikhululekileyo nezikhuselekileyo, izama ukuba ngumyili wezihlalo kunye nomenzi wazo.
Ukubonelela ngezihlalo ezikhuselekileyo, ezinoqoqosho kunye noqoqosho kubathengi ngezakhono zethu zobungcali.
Ukubangumyili wezihlalo kunye nomvelisi.